NextMapping | Mustaqbalka Shaqada iyo Awooda Summada
Dhawaan waxaan marti u ahaa Zync wakaaladaha filimka taxanaha ee kahadlaya mustaqbalka shaqada iyo awooda sumadda.
Boostada annaga (kooxda Zync iyo naftayda) ayaan ka wada hadalnay sababta lahaanshaha astaan ​​adag in ay sidaas muhiim ugu tahay hadda sidii aan hore u ahaan lahayn.
Halkan waa qoraalka transcript-kaas - ama halkan waad ka dhagaysan kartaa.
Brad: Dhammaantiin waad salaaman tihiin oo waad ku soo dhaweyseen toddobaadkan wax walba waa astaan. Waxaan runtii sharaf iyo farax ku nahay inaan haysano marti qaas ah, Cheryl Cran, waxay nagu soo biirtay sawirka maanta ee mustaqbalka shaqada iyo sumadda.
Cheryl Cran waa mustaqbalka khabiir shaqo iyo aasaasihii NextMapping.com iyadu waa qoraa sagaal buug oo ay ku jiraan daabacaadii labaad ee "NextMapping - Kaqeybgal, Fududee oo Abuur Mustaqbalka Shaqada" waana buugga wada-shaqeynta oo runti waxaan la shaqeynay Cheryl magaca NextMapping iyo meeleynta NextMapping. Iyadu waa sidoo kale tirada koowaad ee mustaqbalka saameyn ku yeelan kara shaqada iyo lataliyaha abaalmarinta caalamiga ah ee guuleysta. Waxaa lagu soo bandhigay Forbes, Huffington post, Metro, New York, CBS iyo dheeraad ah. Marka Cheryl, waad ku mahadsan tahay sidaad noogu soo biirtay maanta runtiina aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kaala hadalno mustaqbalkaaga.
Cheryl: Thanks Brad. Waan ku faraxsanahay inaan halkaan imaado.
Brad: Waxaan rabnaa inaan si sax ah ugu boodno sababtoo ah kooxdu waxay leedahay su'aalo badan adiga runti waxaan dooneynaa inaan helno aragtidaada waxa dhici doona iyadoo lagu saleynayo wax walba oo socda. Marka waxaan runtii jeclaan lahayn inaan ku bilowno annagoo ku weydiinayna sida ay wax u socdaan hadda iyo wax kasta oo noocee ah oo aan ku helno jidkeenna, sideed u aragtaa muuqaalka shaqada inuu is beddelayo sannadaha soo socda?
Cheryl: Hagaag, ugu horrayn waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho waxaan saadaalinay 10 sano ka hor in 50% dadka shaqeeya ay noqon doonaan kuwa fog fog marka la gaaro sanadka 2020.
Uma saadaalin in masiibo ay tahay mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan, laakiin dhammaan calaamadaha iyo dhammaan cilmi baaristii aan ku sameynay qaab aqoonsi waxay tilmaameysaa mustaqbal otomaatik ah halkaas oo aan ku yeelan doonno qalab otomaatig ah, robotyo badan, tiknolojiyad dheeraad ah. hal-abuurnimo, taas oo macnaheedu yahay in dadku ay raadinayaan inay ka shaqeeyaan meel fog. Kahor masiibada, ururro badan ayaa bilaabay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan dhaqan shaqo fog. Hadda waxa dhacay waa masiibada oo khasbay, sidaa darteed waxaan xaqiiqdii u soconaynaa mustaqbal sii soconaya oo ah mid sii fog oo shaqada diirada saaraya.
Waxa aan hadda ku arki doonnaa taas waa shuruudda ay u baahan yihiin hoggaamiyeyaashu in ay hoggaamiyaan si aad uga duwan kuwii ay hore u hoggaamin jireen. Waxaan arki doonnaa kooxo badan oo iskood isu maareeya. Waxaan arki doonnaa in ururradu ay u tartamayaan hoggaamiye nimo nooca Holacracy iyo hoggaanka nooca bulshada. Mar labaad, kuwanu waa waxyaalo, oo aan wax ku qoray buugaagtayda iyo wixii aan ka wada hadalnay. Mustaqbalka shaqadu wuxuu sii soconayaa shaqaale badan oo hogaamiya shirkado ay hogaaminayaan. Meeshaasna waan joogsan doonaa oo waxaan u daynayaa inay uga hadho furitaanka baaritaan dheeraad ah.
Brad: Markaa markaad ka hadlaysid shaqaalaha hogaaminaya, maxaad u malayn inay yihiin qodobbada qaarkood ee is baddali doona markii waxyaabaha shaqaaluhu hogaaminayo ay ka soo horjeedaan shirkad hogaamisa?
Cheryl: Hagaag marka hore waxaan arki doonnaa koror ku yimaada dhaqaalaha gig. Waxaan arki doonnaa shaqaale badan oo dhahaya, waad ogtahay waxa, Runtii ma doonayo inaan u shaqeeyo hal shirkad. Waxaan rabaa khibrad warshadeed oo badan. Marka waxaan u shaqeynayaa dhowr ururo qandaraasle ahaan, sida madax-bannaan, iyo inaan u shaqeeyo qaab ka caawinaya inay dhisaan saldhiggooda aqooneed laakiin sidoo kale waxaan kordhiyaa xulashooyinka mustaqbalkooda. Marka shaqaaluhu hogaamiyo waxay ka dhigan tahay xitaa iyada oo ay jirto xaalada hada aan ku jirno iyo haa, in aan aad uga warqabo tirada shaqo la aanta ka jirta Mareykanka iyo Kanada ee waqtigan lagu jiro aafada, taas oo aan ka soo horjeedayn waxaan aragnaa in ay wali jiri doonto. shaqaale yaraanta markay arrimuhu dib ugu noqdaan sidii caadiga ahayd, markaa uma noqonayso inay ku noqdaan sidii ay ahayd. Waxay aadi doontaa mid caadi ah oo caadi ah oo soo socota waxay noqon doontaa jawi aad u kaladuwan halkaas oo shaqaaluhu ay go’aansan doonaan inta iyo sida ay u shaqeeyaan.
Shaqaaluhu waxay dalban doonaan inay u shaqeeyaan meel fog oo ka mid ah sharraxaadda shaqada. Shaqaaluhu waxay qeexayaan sida ay u shaqeeyaan iyo ururada waxaay weli ku qasbanaanayaan inay helaan dad hibo leh oo ururada ay la kulmaan si ay u buuxiyaan baahida shaqaalaha iyo sida ay u doonayaan inay shaqeeyaan taasina waa uun xaqiiqo cusub oo ay ururada soo mareen laqabsashada ka hor tan. Laakiin hadda runtii waxaan eegaynaa sida aan u soo jiidanno kartida ugu wanaagsan anagoo haysanna shaqaale diiradda saaraya deegaanka iyo jawiga ku foogan shirkadaha.
Jeremy: Cheryl, maxaad u maleyneysaa inay muhiim u noqon doonto suuqyada iyo suuqleyda inay ka ogaadaan xaqiiqadan cusub?
Cheryl: Waxaan u maleynayaa inay wax ka beddeleyso dooddii astaanta ahayd. Waxaan u maleynayaa marar badan markaan eegno astaan ​​dabcan iyo, oo aan la shaqeyno niman, waxaan ognahay in howshaadu runtii qoto dheer tahay oo aad eegto xaglaha oo dhan, waxaad fiirineysaa isku soo uruurinta, macmiilkaaga iyo waxyaabahaas oo dhan waxaad tihiin rag runtii si wanaagsan baad u shaqeysaan.
Waxaan u maleynayaa inay astaanta hadda u baahan tahay inay lahaato farriintaas oo muujineysa qiimaha hay'adda oo ay u muujiso shaqaalaha in astaantu tahay urur ay hoggaamiso shaqaalaha. Sumaduhu waxay u baahan yihiin inay la jaan qaadaan dabeecadaha shaqaalaha cusub. Sumaduhu waxay u baahan doonaan inay lahaadaan siyaasad shaqo oo fog, hanaan shaqaale anshaxeed oo ay waafaqaan ballanqaad shaqaale oo leh khibrad shaqaale marka lagu daro khibradda macaamiisha.
Brad: Ma waxaad dhihi lahayd, Cheryl, shaqaaluhu waxay filayaan inay waxyaabaha run ahaan doonaan oo run yihiin oo toosan.
Cheryl: Haa, iyada oo la raacayo wararka been abuurka ah ee aan naxdinnay ee dadku waxay runtii xasaasi u yihiin is-waafajinta iyo wadajirka, taas oo hoos ugu dhaceysa xaqiiqada. Markaa waxay taas ku raadinayaan magacyo. Waxay raadinayaan shirkado ku nool sumadda, iyagoo ah astaanta, una keenaya sumadda. Marka loo eego NextMapping mid ka mid ah waxyaabaha sifiican noo shaqeeyay mar alla markii aan u aqoonsanay in idinka oo ah ragga ayaa ahaa xaqiiqda in sumadda ay gebi ahaanba la midowday waxa aan ku saabsan nahay, kaas oo ka caawiney dadka in ay ogaadaan waxa ku xiga. Markaa hadii astaantaasi aysan iswaafajin, dadku meesha ma joogaan.
Ma lihid waqti dambe oo aad dadka ku guuleysato, astaantu waa inay deg deg ku degto oo si sax ah u dhacdaa si dadku ay u helaan isla markaaba isla markaana ay qiimeynta isla markiiba ka helaan sumadda.
Gabi: Adoo ka hadlaya heerka ururka, qaab dhismeedka sida aan u shaqeyno, isbedelo saacado kala duwan, shaqo dheeri ah, sidaad tiri ama wax kale?
Cheryl: Oh, dhammaan waxyaabaha kore. Haa. Waxaa la iweydiiyey su’aasha kale maalinta kale ee ku saabsan dhismaha guryaha. Waa maxay xaqiiqada faafa ee faafa ka dib u dhiganta dhismaha guryaha shirkadeed? Hagaag, ururo fara badan, masiibo ka hortag ah, waxaan durbaba fiirineynaa nooca ay u egtahay goobta shaqada fog inay u egtahay? Waad ogtahay, waa maxay boqolkiiba shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska? Waa maxay boqolleyda meel fog ka shaqeyn doona? Sideen u yeelnaa taas? Hagaag, taasi waxay u baahan tahay siyaasad shaqo oo fog, oo shirkado badani ay hadda fiirinayaan. Marka shaqadu waa inay ahaataa, waxaan u maleynayaa in badan oo la carte ka soo horjeedo in ay jirto hal wado oo lagu shaqeeyo. Marka waxaan aaminsanahay mustaqbalka inuu noqon doono miyaad dooneysaa inaad shaqeyso waqti buuxa oo fog ama miyaad dooneysaa inaad xafiiska 50% waqtiga fog ka shaqeyso, 50% waqtiga aad ku habboon tahay shaqada noocaas ah.
Waxaan arki doonaa is waafajin ballaaran oo ku saabsan shakhsiyadda iyo qaabka shaqada iyo nooca shaqada ku habboon iyaga. Dhibaatada xiisaha leh waqtiga aan hadda ku suganahay waa isbarashooyinku way sii wanaagsanaanayaan inta lagu jiro cudurka faafa. Sabab? Sababtoo ah guud ahaan waxay si ka fiican u shaqeeyaan iyaga keligood. Waa tacaddiyo la halgamaya sababta oo ah waxay ku guuleystaan ​​qof qof in uu ku mashquulo nashaadaadka xafiiska deegaanka, durba waan aragnaa, waad ogtahay, gudaha, nooc ka mid ah fududeynta dib u dhaca faafa, waxaan aragnaa ururro eegaya. tirada dadka xafiiska jooga. Aniga waxay ila tahay in isbeddelkaasi sii socon doono. Waxaan u maleynayaa inaan arki doonno maydad diiran iyo xafiisyo iyo inbadan oo ka mid ah noocyada fog ee xafiisyada iyo kooxaha wareegaya. Aniguba waxaan u malaynayaa isticmaalka xafiisku inuu noqon doono mid badan, qaab dhismeedka nooca WeWork. Biinanka koox dad ah oo u yimid mashaariic. Iyagu wali way shaqeyn doonaan, waad ogtahay, mar labaad, hybrid fog iyo xafiiska. Waxaan sidoo kale arkaa xafiisyo, dhismayaal shirkadeed oo eegaya ku dhowaad sida Airbnb ee deggeneyaasha. Waxaan u arki doonnaa Airbnb shirkad halkaas oo aad awoodo inaad ku isticmaasho boos ka baxsan sida hadda loo isticmaalo. Is badal badan ayaa imanaya isla markaana dhaqso u socda.
Masiixi: Waxaad ka hadashay sida ay u saameynayso ganacsiyada. Waxaan isweydiinayay hadii masiibo saf ah ay wax ka badali doonto sida dowladaha ay dhab ahaan u dhaqmaan?
Cheryl: Dowlada, waxaan aaminsanahay inay lamid tahay shaqaalaha ay hogaaminayeen shirkadaha, waxaan arki doonnaa muwaadin hogaamiya dowlada dhamaanteenna halkaas ayaan kusii jeednay. Waxaan ula jeedaa, Kanada waxaan aad ugu nasiib badanahay maxaa yeelay waxaan ku nool nahay dimoqraadiyad run ah, laakiin waxaan arki doonnaa guud ahaan inbadan oo ah wixii aan ku aragnay, lacagtana lagu maalgeliyay ganacsi yar iyo waad garanaysaa,, shaqaalaha daryeelka caafimaadka, adeegyada muhiimka ah ee ka imanaya dhinaca shaqada dawladda.
Maaddaama ay dowlad warshadeed leedahay shaqo badan oo ay qabato si ay ula qabsato mustaqbalka shaqada.
Taasna waxaan dhihi karaa sababta oo ah waxay ahaayeen macaamiishayda waxayna ka mid yihiin macaamiishayda.
Iyo waxa aan uga jeedo taasi waa warshado badan oo soo jireen ah sida maaliyadda dowladda, caymiska, waxay si adag ugu adkeysteen sida ay u qaabeeyeen goobta shaqada oo ay caqabad kala kulmeen la qabsiga shaqada dhabta ah ee dhabta ah, maxay tahay? , wixii ku dhici lahaa dhowaan, laakiin sidoo kale waxay dhibaato ku qabaan soo jiidashada iyo sii wadashada kartida ama dadka maxaa yeelay iyagu aad ayey u xadidan yihiin sida aad ugu shaqayso iyaga iyo iyaga.
Marka waxaan dhahay sannado, labada meelood ee ay noqoneyso mid xanuun badan maadaama loo shaqeeyayaashu ay noqon doonaan dowlad iyo ururro. Sababta taa jirta ayaa ah qaab dhismeedka mana ahan mid dabacsan oo ku habboon meesha aan u socono mustaqbalka shaqada. Macnaheedu maahan inaadan cusboonaysiin karin hay'adaha, laakiin waxaa jira hoggaan fara badan oo u baahan in laga faa'ideysto oo laga dhigo inay la kulmaan xaqiiqadan shaqo fog, laakiin sidoo kale la kulmaan xaqiiqada shaqada dabacsan, la kulanta xaqiiqda dhaqaalaha weyn.
Brad: Waxa aan maqlayo waxaad dhahdaa waa ka hor meesha, waad ogtahay, inay ahayd meherad ama dawlado inay aad u qori jireen sida wax loo qaban lahaa. Waxa hadda dhacaya waa in muwaadiniinta, dadku, shaqaaluhu ay dhahaan dowladaha iyo ganacsatada labadaba, tan ayaa ah waxa aan fileynay waana tan aan rabno. Marka laga eego aragtida caanka ah, awoodda astaanta ayaa laga beddelayaa,, waad ogtahay, dowladaha iyo loo shaqeeyeyaasha ayaa ku soo noqda dadka. Ma dhihi laheyd taasi waa qiimeyn cadaalad ah?
Cheryl: Waxaan dhihi lahaa taasi waa mid aad iyo aad u sax ah. Marka sida shirkadaha oo kale loo hogaaminayo, dawlada ayaa muwaadinku hogaamiyaa ama halka aan jecel nahay inaan aamino, tusaale ahaan, halkan Kanada waxaan rabnaa inaan rumeysanahay inaan nahay dimoqoraadiyad aad ayaan nasiib uguheysan nahay inaan heysano daryeel caafimaad , waad ogtahay, waxaan nahay, waxaan dareemayaa qaabka aan wadan ahaan u howl galnay inta lagu gudajiray aafadan faafida. Marka sidaas ayaan nahay, nasiib aad ayaan u nasiib uleehay in kastoo aan nahay shaqo bixiye dowladeed, haddii sumcaddaadu aysan u dhigmin magacyada tartamaya. Kuwa tartamaya ee dawlada ayaa hada ah Amazon iyo Google iyo dhamaan shirkadahan teknolojiyadda ah hadaan kun sano jir ahayna waxaan fiirinayaa dhamaan xulashooyinkayga hadana waxaa jira xulashooyin badan hada inkasta oo aan ku jirno masiibadaas, waxaa la saadaalinayaa 32 milyan oo shaqaale caalami ah oo daafaha dunida ka yaraa ilaa sanadkii 2030.
Dowladdu waxay u baahan tahay inay eegto sida loola tartamo Amazons, ka Googles, bilowga labada dabacsanaan laakiin sidoo kale qaab dhismeedka ah si aan awood ugu yeelan karno bixinta adeegyada aan u baahan nahay inaan bixinno.
Goobta shaqadu waxay noqotey mid diirada saareysa dadka oo aado waxa dadku rabaan oo ubaahan fikirkooda ganacsi ee soo jireenka ahaa inay tahay inay nala qabsadaan maxaa yeelay sidaan ayaan u shaqaynaa.
Su'aalaha ay dowladdu u baahan tahay inay weydiiso waxay ka badan yihiin waxa uu yahay baahida qofka iyo maxay yihiin xalka qaarkood ee suurtagalka ah?
Marka laga hadlayo adeegyada muwaadinku waxaa ugu fiican ee u adeega qof, sheeko bot, AI ama robot? Taasi waa mustaqbalka cusub ee su'aasha shaqada. Waa maxay shaqadu, maxay tahay baahida iyo maxaa xalka ugu fiican? Runtii taasi waa waxa wadista ay ku socdaan halka ay tagayaan.
Gabi: Waa maxay doorka xidhiidhka aadanaha iyo is dhex galka ay u yeelan doonaan hore shaqaale ahaan, macaamiil ahaan iyo bulshada guud ahaanba?
Cheryl: Waxaa jira baqdin laga qabo daayeero halkaas kusii nagaan doona, robotyadu way imaanayaan waxayna la wareegayaan shaqooyinka qof walba mana u baahan doontid dad dambe. Cilmi baarista aan helnay waa, taasi run maahan. Xaqiiqdii, golaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegaya in dadku ay aad uga muhiimsan yihiin sidii hore. Si kastaba ha noqotee, sababta keentay in sheekada ku saabsan robots-ku ay soo socoto waa sababta oo ah waxa keenay cabsi laga qabo heerka xirfadeed, oo u dhigma xaqiiqda mustaqbalka. Marka waxa aad haysataa waa fara badan oo dadku u baahan yihiin in ay noqdaan kuwo xirfad leh oo dib loo qorsheeyo si loo helo awood farsamo si kor loogu qaado adeegyada aan dadka siino.
Marka runtii waa bini aadam ka badan sidii hore mustaqbalkii aadamuhu. Taasi waxay ka dhigan tahay annaga oo ah alaabtu waa inaynu eegno lens-ka ee sidee bay tani u caawinaysaa aadanaha?
Waa inaan wax weydiinaa, sidee bay tani u caawinaysaa dadka?
Mustaqbalka wuxuu ku saabsan yahay dadka marka hore oo ay weheliso macaash. Waxaan u malaynayaa haddii ay jiraan wax, masiibo-jirkan inagu khasbay dhammaanteen inaan tagno, ok, sugaan labaad, bal aan eegno saameynta dhammaanteen aan ku joojineyno deegaanka ama sidee u dhisi karnaa mustaqbal waara oo astaanteenna u hoggaansanaanta waarta?
Waxaan sidoo kale helnay in dadku ay ka heleen wax badan oo ku saabsan dadka si ay ula macaamilaan xaqiiqdooda nololeed. Marka sidee ayaynu ugu noqon karnaa hogaamiyayaal naxariis badan duruufaha shaqsiyadeed ee dadka?
Awoodda iswada iyo mustaqbal robotiinka runtii waxay nagu qasbeysaa inaan nahay bini aadam ka wanaagsan bina aadamka ayaa loo baahan doonaa.
Iyo horumarinteena xirfadeed waxay u baahan tahay inay ahaato laba shay.
Midka koowaad, haa waxaan u baahan nahay inaan sare u qaadno la-qabsiga teknolojiyadeenna.
Marka labaad, waxaan noqon karnaa dad bini aadam ah oo wanaagsan.
Waa inaan kicinaa dareenkeena, waa inaan kor u qaadnaa caqligeenna qiirada. Waa inaan sare u qaadno fahamkeena sida aan u shaqeyn karno aniga iyo sidoo kale anaga. Waxaanna qabaa inay taasi tahay fursad xiiso leh mustaqbalka.
Brad: Waa wax xiise leh inaad dhahdo maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay kuwa wax iibiya iyo suuqleyaashu marwalba oran doonaan, waa hagaag, waxaan marwalba dhageysanay macaamiisha waxayna ku saxsan yihiin qiimeyntaas wayna dhageysan jireen. Laakiin waxaan u malaynayaa sida ay tahay inay dhagaystaan ​​laga yaabo inay mustaqbalka ka duwanaan karaan. Markaa kahor inteysan dhageysanin sida dadku wax u iibsadaan ama maxay wax u iibsadaan, waxaan u maleynayaa dhageysigu hadda inuu noqdo waxa ku dhiirrigeliya inay iibsadaan ama waxa ku dhiirrigeliya xitaa inay ka qeybgalaan sumadda ama, ama doortaan astaanta. Markaa, waa, waxay u egtahay inaad gasho oo dhageysato heer aad u qoto dheer. Waxaad ka hadashay sidii aad u fiicnaan lahayd aadanaha. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan sidoo kale ahaano suuq-geynno iyo suuq-geyn sidoo kale. Waa inaan dhageysano qaab ka duwan. Waa inaan dhageysano iyadoo aan ka fileynno wax yar, waad ogtahay, maxaa yeelay waxaa jira labo qaab oo loo dhageysto. Waad dhegeysan kartaa oo qofka sugi kartaa qofka inuu qirayo dhammaan waxyaabaha aad hadda ka fikireyso. Ama waxaad la gali kartaa maskax fayow oo waad dhagaysan kartaa oo runti waad maqli kartaa waxa qofkaasi dhahayo. Aniga waxay ila tahay in taasi ay tahay isbedelka aan ku qasbanaan karno in aan ku noqonno ganacsadeyaal badeecado ka wanaagsan sidii kuwa bini'aadamka ah.
Cheryl: Waxaa jira waxaan ugu yeeri lahaa dhageysiga dusha sare. Meeshaad dhageysatid si aad u aragtid haddii aragtidaada fikirkeeda la hubin doono ka dibna ay jirto dhageysi xasaasi ah taasna waxay u baahan tahay maskax ballaadhan meeshaas oo aysan ka jirin fikrad hore loo sii ogaa oo ay jiraan waxyaabo badan oo raadinaya waxyaabahaas la yaabka leh ee qofkaasi uusan waligiis qaadan doonin si kale haddii loo dhigo, iyaga miyir beel uma aha iyaga, laakiin waxaa soo qaaday khubaro magacyadooda.
Waxaan soo arkay in adiga iyo kooxdaadu aad idinka fiican tihiin taas. Markaa waa sida wax ka hooseeya heerka dusha sare oo awood u leh inay ku gartaan ballanka astaanta iyadoo la fulinayo ballaarinta aadamiga. Waxaan u maleynayaa inay jirto, heerar kala duwan oo dhageysiga. Waxaan u maleynayaa inaan imminka galayno dhageysi dareen qoto dheer leh halkaasoo diirada lagu saarayo waxa aasaaska aadanaha halkaan, halkaasoo sumadda ay kula kulmi doonto baahi aadamiga.
Jeremy: Sideed u maleyneysaa ganacsiyada iyo magacyada, iyo in si cad ay dowladdu u horumarin karto mustaqbalka maxaa yeelay dabacsanaankan dheeriga ah oo dhan, waxaan ula jeedaa waxaa jira kharash ku xiran taas, sax?
Cheryl: Waxaan u maleynayaa inay hoos ugu dhacday waxa aan ku sameyno NextMapping, taas oo ah in laga caawiyo hogaamiyaasha sidii loo balaarin lahaa awoodiisa hogaamineed. Runtii waxay ubaahantahay hogaamiye cusub oo laqabatimaya si loo bilaabo.
Faafida ayaa qasabtay waa xaqiiqsashada inaan dhamaanteen la qabsan karno waa xoog carqalad ku keentay ganacsatada inay fiiro gaar ah yeeshaan, taas oo runtii ah mid xiise leh maxaa yeelay cudurka safka hore waxaad lahaan kartaa khubaro sida nafteyda ah oo isweydaarsanaya anigoo sheegaya in cirku soo dhacaya iyo in qof walbaa socdo, haa, haa, waan sii wadi doonnaa wixii aan si sax ah u qabanayno?
Taa bedelkeed waxaan hadda haysannaa carqalad nolosha adduunka ka jirta oo qof walbaa dareemo qodobbada xanuunka leh ee arrintaas.
Marka waxaad leedahay labo ikhtiyaar oo isbadal ah iyo carqalad taasi. Waad iska indho tiri kartaa xanuunka oo aad usii wadi kartaa sidii laguu qorsheeyay oo kale oo aad u sameysay safmar hore iyo, taasina waa doorashada. Doorashadaasina waxay kuu horseedi kartaa inaad noqoto mid aan qusaynin mustaqbalka sida ganacsi ahaan .B, waa inaad u furnaataa inaad heshid ama kala wareego maxaa yeelay qof aad uga culus ama raba inuu la qabsado ayaa ciyaarta ka horreysa. Jawaabta laga bixinayo dhibcaha xanuunkii hore,
Waxaan dhihi lahaa khabiir ku xeel dheer istaraatiijiyadda in dooddu noqon lahayd, si fiican tani waxay ku kacaysaa lacag aad u badan INAAN la sameeyo isbadalkan.
Aniga waxay ila tahay in doodaha cusubi tahay waxa qarashka ah ee ah samaynta isbeddelka iyo xogaha iyo ansaxnimada taasi iyo ahaanshahooda, maxaa yeelay qibradeyda, hogaamiyayaal badan ayaa aad u adkeeyay kuna jaangooyay mowqifkooda
Xitaa iyada oo in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah ay ka dhex jirto kooxdeena, qofkeenna khibrad uma lihin wixii hadda dhacaya. Si kasta ha noqotee waxa aan haysanaa waa isku-duubnaan, dabacsanaan iyo rabitaan in aan iska dhigno meel iska dhig ah si aan u eegno dariiqooyin aan ku wada shaqeyn karno oo aan ku darsanno qiimo.
Waxa horay ugu sii dhaqaaqaya hogaamiyaasha ayaa ah rabitaanka in la yiraahdo, ma aqaan, laakiin waxaan helnay koox ay ka buuxaan dad caqli badan oo isla markaana aan wadna furfuran doonno maskaxdeena Waxaan sare u qaadeynaa xirfadaheena hogaaminta si aan u noqon karno laqabsasho badan, la rogrogmi karno oo aan ku dhex geli karno, aan awood uheli karno, waxaan ka fikiri karnaa waxa socda iyo istiraatiijiyad ahaan qarashka aan sameynin isbedelka waa awoodeena aad uheellan mustaqbalka.
Brad: Waxa aan maqlayaa waa in dadku runti ay gartaan in aysan kaliya kaliya weydiisan karin kuwa kale inay helaan dabacsanaantaas iyaga oo aan is beddelin naftooda. Xaq?
Cheryl: Su’aal malahan. Marka hal shay waxaan doonayaa inaan cadeeyo runti kama hadlayo marka aan kahadleyno dhaqaalaha hogaaminaya shaqaalaha ama ganacsiga hogaaminaya shaqaalaha, runti waxaan kahadleynaa isla xisaabtanka labada dhinac. Marka qofkasta oo shaqaale ah inuu badbaadiyo, runti kama badbaadi doontid adoo dhahaya, waxaan hayaa dhamaan kaararka, mr loo shaqeeyaha, hadana waxaad sameyn doontaa waxkasta oo aan kugu amro inaad sameyso. Taasi maahan waxaan dhahayo. Waxaan idhaahdaa waa isla xisaabtan. Markaa shaqaaluhu diyaarka u yihiin inay shaqaaleeyaan oo dib u soo celiyaan iyaga oo aan sugin inay u shaqeeyaan loo-shaqeeyahaas inuu iyaga u sameeyo.
Waad ogtahay, si kale haddii loo noqdo bartaas cimriga dheer oo dhaha "Waxaan mas'uul ka noqonayaa aqoontayda iyo waxbarashadeyda si aan u noqdo mid la aqbali karo oo aan ugu dabacsanahay oo aan ka caawin karo shirkadda 'pivot'.
Waxaa loo baahan yahay in la isla xisaabtamo labada shaqaale iyo loo shaqeeyaha.
Cheryl: Macaamiisha iyo asxaabteyda aan lahadalnay waxay i yiraahdaan waxaa jira wicitaan toositaan ah oo dhacaya isla waqtigaasna qeyb ka mid ah wicitaankaas toosinta waa mid la mid ah 1980-yadii markii heerarka dulsaarku ay ahaayeen 22% oo dadku ay guryahooda ku waayeen.
Sagaashannaadkii markaan dagaallamay iyo dib-u-dhackii 2008.
Carqaladeyntaani waa wicitaano toos ah, waxayna u horseedaan su’aalo ay kamid yihiin, maxaan u bahanahay inaan barto? Sidee ayaan u wada shaqeyn karaa? Sideen ula shaqeeyaa? Sideen u kobcin karaa xirfaddeyda? Sideen uga caawiyaa dadka kale inay guuleystaan?
Kuwani waa su'aalaha shakhsiyaadka, haddii aan isweydiino nafteena, markaa waxaan heleynaa xasillooni shaqo oo cimri dheer ama deganaansho shaqo. Laakiin haddii aad dib u fadhiisanaysid oo aad socotid, waa hagaag, waad ogtahay, in ay dawladdu ilaalinayso. Hagaag taasi waa uun qadada saafiga ah. Taasi masuuliyad kama saarna doorkaaga abuurista mustaqbalkiinna.
Abuuritaanka mustaqbalkaas runtii waa waxa ku jira gacmahayaga oo dhan.
Markaa weli fursado badan ayaa jira inkasta oo aan marayno xilli aad u adag taariikhda iyo wakhti adag, aad ayaan uga duwan nahay xilliyadii adkaa ee aan soo jirnay waagii hore, laakiin haddana waa in aan si qoto dheer u qodnaa isla aagagga aan horay u haysanay si aan nafteena uga dhex baxno. Laakiin markay ka soo baxdo arrintan, awooddaas oo ah inay korto oo ma aha oo keliya inay sii noolaato waxay fure u noqon doontaa dadka iyagu, kuwaas oo si wanaagsan wax uga qabtaan qaybtaan dambe ee halxiraalka. Aniguna, waxaanan u malaynayaa inay runtii awood badan tahay markaad iskudarto waxkasta oo aad ka hadlayso mustaqbalka shaqada iyo waxa ay u baahan yihiin ganacsatada iyo suuqleeyda si ay u taageeraan waxaas oo dhan.
Brad: Taasi waa sax. Fariinta waa in la waafajiyaa. Booska waa in la waafajiyaa. Maheli kartid dhamaan dadkaan oo ka shaqeeya xaaladahan ama ku hoos nool dowladahaas. Ka dib marka suuqgeynta iyo sumeeynta ay isla ahaato isku mid. Waxay ahayd sidii ay ahaan jirtay. Markaa runtii waa annaga dhammaanteen noo eg oo fiirinta waxkastoo guud ahaaneed iyo fahankeenna ah si loo najaxo oo loo sameeyo waxyaabahaas, runtii waa inaan sameynaa saddexda arrimood ee aad sheegtay. Waa inaan lahaano hogaan wanaagsan. Anaga, kuweena ah hogaamiyaasha, waa inaan noqonaa hogaamiyeyaal wanaagsan, waana inaanu wax badan ka sugna hogaamiyayaasheena hadii, hadii aan ku jirin jagada hogaaminta, waa inaan noqonaaaaaaaaaaajyada iyo suuqyadeena oo aan ku fiicanahay shaqooyinkeena iyo inbadan oo diyaar u ah in lala xisaabtamo oo filayaan isla xisaabtanka sidoo kale. Kadibna ugu dambayntii, ujeeddadaada, waa inaan noqono dad wanaagsan oo aadane ah.
Kaliya waa inaan noqonaa dad bini aadam ah oo wanaagsan. Aniga waxay ila tahay taasi waa tan ugu dambeysa waxa ay tani hoos ugu dhacdo. Tanina waa waxa aan ka qaadan karno waxaas oo dhan. Cheryl, waad ku mahadsan tahay waqtigaaga. Waad ogtahay, waxaan runtii ku faraxsanahay inaan halkaan kugu haysano. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kawada hadalno mustaqbalka shaqada iyo mustaqbalkeena sumadda iyo mideynta labadaas shay. Markaa waad ku mahadsantahay inaad nagu soo biirtay. Runtii waanu u mahadnaqaynaa. Mahadsanid. Marka qof walba, taasi waa wax walba astaan ​​u ah toddobaadkan.